ngesondo kunye noonwabo | Isiseko soMvuzo: Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya ubudlelwane Isini kunye ne-Porn
Igama elithi pornography livela kumazwi esiGrike athi "i-porno" kunye ne "graphie" elithetha "imibhalo okanye malunga nobuhenyu".
Iidrafiya njengento yokuvuselela ingena emzimbeni ngokuthe ngqo kwiintliziyo, ngokuyininzi amehlo kunye neendlebe. Unxibelelwano oluchanekileyo kwinkqubo yesistim ephakathi, ngokukodwa inkqubo yokuvuza okanye isikhungo sokonwaba kwengqondo. Ilungiselela ukuvuselela ngokwesondo ngokukhawuleza. Ukutshintsha kwemizimba kubangela ukuba kwenzeke ngokukhawuleza: intliziyo iyabulala ngokukhawuleza; Ukuphefumula kuyaba nzima kwaye umlindi uqala ukuziva ukuphosa kwizitho zangasese.
Iifoto zoonografi namhlanje nge-intanethi zihluke kwiifoto zoononophelo zangaphambili. Iifoto ezimanyanisiweyo zamaphephancwadi ka-gentlemen okanye iifrimu ze-bluhlaza ezingenayo impembelelo kwingqondo yokuba uncedo olungapheliyo lokusasaza, iividiyo ezivuthayo. Ubume bentsebenziswano ye-intanethi buvumela abantu ukuba batyeke ngokulula kwizinto ezivuselelayo ngokukhawuleza xa bexhamla ngokuhamba ngoku. Njengoko abantu bebukela ubuninzi boononografi, ubuchopho babo baqala ukuvelisa ngaphantsi dopamine ukuphendula. Oku kukhokelela ekunciphiseni umnqweno wento ababukeleyo. Nangona kunjalo banokubuyisela ukulinganisela kwe-dopamine ngokubukela amavidiyo angatshitshisiyo okanye amaninzi. Ezi zikhawuleza zithumela 'i-hit' enkulu ye-dopamine.
Umzimba uthanda ukulinganisela. Xa sinezinto ezaneleyo zokutya, ukusela okanye ubulili bethu ubuchopho bubonakalisile. Lo mqondiso wesistim usinceda siyeke ukutya, ukusela okanye ukulala ngesondo ukuze sikwazi ukuqhubeka kunye neminye imisebenzi efunekayo yokuphila kwansuku zonke. Kodwa xa 'sithintela' kwizinto ezisetyenziswayo okanye ukuziphatha, le ndlela yokwenza isistim ingafakwa kwixesha elifutshane, eligqithiswe ngokufumaneka kwe-binge stimulation. Ngamanye amazwi, ingqondo yethu iguqulela ukuxubha umvuzo njengomsebenzi 'wokusinda' kwaye ivumela ukuba siqhubeke sizithobela okwethutyana. Cinga ibhere ngaphambi kokuba ubusika busika, kunokugwinya i-salmon ye-20 ngaphandle kokugula.
Iintombi ezininzi eziselula ezisetyenziswayo namhlanje zisebenzisa i-pornography kwimfundo malunga nesondo kunye nemihlali. Bahlala bebukela bodwa. Ukwenza umsebenzi wokuzibandakanya ngokwesondo kubangela ukuba ubuchopho babo bubucudluze ngexesha lokulindela ukuvuselela i-hyper-stimulating novelty. Ingakhokelela ekuphuhlisweni kweemfesane, utshintsho olungalindelekanga kwintsebenzo yesondo kunye nokulutha kwezilwanyana kwezinye. Oku kusebenza nakwabantu abadala, abaninzi babo baqala ukubukela i-porno ukususela ekuqaleni kwasebuntwaneni. Olu hlobo lokuqeqeshwa kobuchopho lugxotha umlindi weenzuzo zezempilo, ukuphuhliswa komntu siqu kunye nemihlali enxulumene nolwalamano lobuhlobo bokwenene.
Amadoda amaninzi agxininisa kwi-pornography enza njalo ngokuthi 'adibanise' kwividiyo nganye entsha, ephantse igxininise ngokugqithisa kodwa kungekhona. Oku kubenza bakwazi ukusebenzisana nemifanekiso yokuvuselela ngokwesini ngeeyure kunye neeyure. Abasebenzisi bahlala bekhangela umfanekiso ogqityiweyo ukuphela. Abazivumi ukunyaniseka njengoko benokuyenza xa belalana neqabane kunye ne-climax.
Imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi ifana nexesha lokukhwelana, kodwa ixesha lokudibana elingaze liphele. Ingqondo yakudala iyibona 'njengokondla okunesidima', ithuba elikhulu lokuchumisa kwaye icime inkqubo yokuhlutha. Ingqondo emva koko ifuna ukuziqhelanisa noku kungazange kube namava ebonanza-amaqabane angapheliyo anomdla wokufuna isichumiso esinokuthi sichaze umnqweno wethu wesondo.
Ngokusetyenziswa kwe-intanethi yesifiso sezesondo ngesimo sezesondo kuqhutyelwa ngabasemzini ngenzuzo yabo kunye nokulimaza kwethu. Ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo kwe-intanethi kuyingozi nakwiminyaka yobudala abanesibindi ababethelwa ngokufunda ngesondo njengolukulungele ukudala. Bafunda ukucoca ubuchopho babo kwizinto ezibonakalayo. Esikhundleni sokufunda indlela yokudlala ngothando, ugcine udibana nomntu, qulunqa intlonipho kunye nokuthintela ngendlela enothando okanye ngokwesondo kunye nabalingane bokwenene, abantu baqinisa indlela yokufumana umvuzo.
<< Ukunciphisa inkanuko yesini